गफ ! .....: लघुकथा : आमाको मुख
लघुकथा : आमाको मुख
आफ्नो गच्छे अनुशार उसले एकझुत्ता अँगुर, चार दाना स्याउ, केहि केरा र सुन्तला किन्यो र सोच्यो अरु के के लानुपर्ला? आफुले अलि अलि कमाई धमाई गर्न थालेदेखि नै बिहे गरेर अन्यत्रै बस्न थालेको उसले एकबाजी आमाको झुत्रेझाम्रे कपडामा लपेटिएको देह सम्झियो । 'आजै हो दिए जस्तो पनि हुने, दिएको गाउँलेले पनि देख्ने' भनेर यौटा धोती पनि किनेर लगिदिनलाई कपडा पसलतिर लाग्यो ।
तर कपडा पसलको सामने पुग्दा उसको विचार यसरी बदलियो कि, 'कपडा उपडामा खर्च गर्न थाल्यो भने त आफ्नो पैसा सब चट् हुन्छ । आफ्ना पनि स्वास्नी, बच्चाहरु छन् ।' अत संगैको किराना पसलबाट यौटा पेप्सीकोलाको बोतल किनेर फलफुलको थैलामा हालेर बाटो लाग्यो ।
बाटोमा धेरै मान्छेहरु हातहातमा ताजा फलफूल तथा मिठाईहरु बोकेर चम्किलो अनुहार लिएर हिँडीरहेका थिए ।
आमा बस्ने घर पुग्नुभदा अलि वर दोबाटोमा उसले यौटा नाङ्गे भुतुङ्गे फुच्चे केटो झण्डै उ जत्रै धैलीमैली उसकि दिदीसँग टुक्रुक्क बसेर रुँदै गरेको देख्यो । त्यस्तै तीनचार महिना अघिमात्र ति बच्चाहरुकि आमालाई बोक्सीको आरोपमा गाउँलेहरुले यहि दोबाटोमा मट्टितेल छिड्केर आगो लगाई मारेका थिए ।
बडो सकसले उ दोबाटो कटेर गयो । घर पुगुञ्जेल उसका गोडाहरु लुला भएझैं भैरहेथ्यो । घर पुगेर आमालाई आफुले ल्याएको तुलफुल दिँदा पनि उ आमाको मुखतिर नहेरी पछाडी फर्केर हेर्दैथियो ।
कतै, 'हाम्री आमालाई जलाउने मान्छेहरुमा यौटा यो पनि थियो भन्दै ति केटाकेटीहरु उसलाई पच्छ्याउँदै त आइरहेका छैनन्?' उसलाई यस्तै लागीरह्यो ।
(बोक्सीको आरोपमा आमाहरु अझै जल्नुपर्ने देशमा मातातिर्थ औँसी आइरहन्छ ईमान्दार भएर । यो लघुकथा जिउँदा मरेका ती सबै आमाहरुलाई समर्पण! ज-जस्ले बोक्सीको आरोपमा मरेतुल्य बेइज्जत हुनुपरेको छ, घोर यातना सहनु परेको छ अथवा जीवन नै त्याग्नु परेको छ ।)
(यो लघुकथा फेसबुकको नोटमा र फेसबुककै ग्रुप लघुकथा कुनोमा पनि सेयर गरेको छु ।)
ब्लगबाट जोडिनुहुने सबैलाई मातातिर्थ औँसीको शुभकामना!
धरती माता लगायत धरतीमा माताको अस्तित्वमा रहने सबै माताहरुलाई प्रणाम ।
Posted by दीपक जडित at 7:58 PM
कथा छोटो भए पनि धेरै कुरा बोलेको छ यो सानो तर सशक्त कथाले । मन छुने कथा !!!
गजलका कुरा : तखल्लुसमा दीपक जडित
कविता : अचानक उर्लेको यो याद